Maxxansaa , Faaksii fi Kaadimaalee hujeeffannoo UNIX irratti hundaa'an qindeessuu
Qindaa'ina maxxansaa jijjiruu
Fuula caancalaa Waraqaa irraatti, dhangii fi harkata waraqichaa qindeessuun akka qindaa'ina durtiitti fayyadamuu dandeessa.
Fuula qaaqaaMi'airratti, filannoowwan baay'ee mijatoo ta'an maxxansaa keetiif filuu dandeessa. Yoo maxxansaan kee adii fi gurraachaan qofa maxxansa ta'e,Halluujalatti "grayscale" filadhu, kanarraan kan hafe"color" filadhu. Yoo gara saxxiilaatti darbuun bu'aa hin barbaachifne argamsiise,Colorjalatti "color" filadhu itti aansuun haala akkeessaan maxxansaa ykn PostScript itti fayyadamu ilaali. Dabalataanis, fuula qaaqaa kana irratti sirrummaa halluu sadarkaa PostSscript dhaan qindeessuu dandeessa.
Maxxansaa Durtii Filachuu
Sanduuqa tarree keessaa maxxansaa filame Maxxansitoota Ijaaramanakka maxxansaa durtiitti tolchuuf, maqaasaa lama cuqaasi ykn qabduu Durtiicuqaasi.
Rogeeffamuu Faaksii Fayyadamuu
Hojii maxxansaa addaa faaksiwwan hundaaf uumuu kee yaadadhu, yoo kun ta'uu baate, fudhataan jalqabaa faaksiiwwan hunda fudha. Qaaqa Meeshaalee - Makiinsa Ergannoo keessaa dirqaaleeMaxxansaafiladhu itti aansuudhaan sanduuqa filannoohujiiwwan maxxansa qeenxeefiladhu.